काठमाडौँ । शिक्षाविद् एवं ‘सर्च फर कमन ग्राउण्ड नेपाल’का राष्ट्रिय निर्देशक भोलाप्रसाद दाहालको ५१ वर्षका उमेरमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा निधन भएको छ । एक कार्यक्रमका लागि अमेरिका जानुभएका दाहालको सोमबार
मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिका ९ नम्वर वडामा रहेको पलाञ्चोक भगवती मन्दिरको दर्शन गरेकी छिन् । अघिल्लो वर्ष पनि अष्टमीकै दिन राष्ट्रपति भण्डारीले पलाञ्चोक भगवती
गौशाला । लागुऔषध गाँजा कारोबार मुद्दामा १८ वर्ष र १५ वर्षदेखि फरार रहँदै आएका दुई अभियुक्तलाई महोत्तरी प्रहरीले मङ्गलबार पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा एकडारा गाउँपालिका–३ का ५२ वर्षीय
म्याग्दी । एक व्यक्तिको निजी लगानीमा जलजला गाउँपालिका–३ स्थित ऐतिहासिक मल्लाज कोत भगवती मन्दिरको पुनःनिर्माण भएको छ । काठमाडाँैको ताहचलका शिवकुमार श्रेष्ठले दिवङ्गत बुवा बाबुलाल र आमा बालकुमारी श्रेष्ठको स्मृतिमा
बाँके । दशैँ आउन अब दुई मात्र बाँकी रहँदा नेपालगञ्ज विमानस्थलमा यात्रुको चाप अत्यधिक रूपले बढेको छ । यात्रुको चापको तुलनामा जहाजको उडान न्यून रहेको छ । जहाज कम्पनीले टिकट
पोखरा । नेपालीको महान चाड बडादशैँको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल तालीम केन्द्र लामापाटनले मङ्गलबारदेखि पोखरामा निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरेको छ । दशैँको अवसरमा बजारमा सार्वजनिक यातायातका साधान न्यून भएका
रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिको बाँफिकोट गाउँपालिका–१० फेरा झुलाको एक घरमा आगलागी भएको छ । स्थानीय शशीराम खत्रीको घरमा गए राति आगलागी हुँदा रु चार लाख बराबरको क्षति भएको छ
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपयकाबाट दशैँ मनाउन २१ लाख भन्दा बढी यात्रु बाहिरिएका छन् । महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका अनुसार विगत चार दिनको अवधिमा सो सङ्ख्यामा यात्रु बाहिरिएका हुन् । स्थलमार्गबाट मात्रै
नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रगाढ छः मन्त्री महासेठ
धनुषा । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नेपाल–भारतको सम्बन्ध प्रगाढ भएको बताउनुभएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन जयनगर–जनकपुर–कूर्था रेल खण्डको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मङ्गलबार भारतको जयनगर पुग्नुभएका मन्त्री
जनकपुरधाम । बडादशैँअन्तर्गत आज महाअष्ठमीका अवसरमा प्रसिद्ध शक्तिपीठ राजदेवी मन्दिरमा प्रसाद चढाउन रातिदेखि नै हजारौँ श्रद्धालु लाममा रहेका छन् । सो मन्दिरमा राति १२ बजेदेखि नै प्रसाद चढाउने क्रम शुरू
विनोद सिंह विष्ट, बैतडी । सडक डिभिजन कार्यालय पाटन बैतडीबाट मार्फत निर्माण भईरहेका तीन ओटा सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय मार्फत निर्माण भईरहेका सडक प्रदेश
कञ्चनपुर । चुनावमा गरिएका वाचा अक्षरसः पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको मङ्गलबार दशैँका अवसरमा आयोजना गरिएको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमका सहभागी सांसदहरूले बताउनुभएको छ । जनताले समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले त्यसलाई
दार्चुला । जिल्लामा महाकाली लोकमार्ग र विभिन्न शाखा सडकमा सञ्चालनमा रहेका ७६ जिपको छत ट्राफिक प्रहरीले हटाउन लगाएको छ । चाडपर्वका बेला सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि भन्दै महाकाली लोकमार्ग तथा
दाङ । तुलसीपुर बजारमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन हुन नसक्दा नगरवासीलाई निकै समस्या हुनेगरेको छ । बजारका मुख्य चोकचोकमा यतिखेर ठूलो सङ्ख्यामा छाडा चौपायाले बिगबिगी मच्चाएका छन् । ती चौपायाले बजार
सलिम अन्सारी, प्युठान । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सुर्य थापाले जनताको हितमा काम गर्न जनप्रतिनिधीहरुलाई आग्रह गरेका छन । नेकपा प्युठानले सोमबार बिजुवारमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता
भीमदत्तनगर । झण्डै अढाई दशकअघि एक कठ्ठा जमीन भाडामा लिएर केरा खेती शुरु गरेका कञ्चनपुर भीमदत्तनगरपालिका–१० तिल्केनीका पूर्ण साउँद अहिले जिल्लामै सफल केरा उत्पादक किसानमा पर्दछ । नगदे बालीका रुपमा
दाङ । पछिल्लो समय जिल्लामा सामुदायिक वनको संरक्षणमा महिला सहभागिता बढेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ दाङले जनाएको छ । अहिले जिल्लामा रहेका ५०४ वटा सामुदायिक वन समूहमध्येमा ६३ वटा वन
विराटनगरका राई अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मजदुर महासंघको सदस्य बन्ने पहिलो नेपाली
सरोज, यादव, विराटनगर । नेपाल टे«ड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष अजयकुमार राई अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मजदुर महासंघ आइटिएफको विश्व कार्यसमितिको सदस्यमा निर्वाचित भएका छन । आइटिएफको इतिहासमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राई पहिलो
भीनपाले गर्यो वडाबाटै स्वास्थ्य सेवा सुचारु
महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपािलका वडा नं. १३ का वासिन्दाले वडाबाट स्वास्थ्य सेवा लिन थालेका छन् । भीमदत्त नगरपालिकाले वडा नं. १३ का वासिन्दाका लागि वडामा वडा स्वास्थ्य इकाई सञ्चालनमा ल्याएको
भारतसँगको हवाई रुट कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकारको असफलताः गच्छदार
सरोज यादव, विराटनगर । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले भारतसँगको थप चार हवाई रुट प्राप्त गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकारको असफलता भएको बताएका छन । विराटनगर विमानस्थलमा